[औपचारिक] सिम अनलक सेवा -3चरणमा आफ्नो मोबाइल फोनको सिम कार्ड अनलक
dr.fone टुलकिट - सिम अनलक सेवा
3 सरल चरणमा तपाईँको फोन अनलक!
छिटो, सुरक्षित र स्थायी
1000+ फोन समर्थित, 100 + नेटवर्क प्रदायकहरू समर्थित
60+ देशहरूमा समर्थित
तपाईंको फोन चयन
तपाईँको फोन अनलक गर्न, सरल छिटो, सुरक्षित र कानुनी बाटो।
तपाईं कहिल्यै प्रक्रिया बारम्बार हुनेछ। तपाईं सामान्य रूपमा फोनको सफ्टवेयर अद्यावधिक र यो संसारमा कुनै पनि नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यो अनलक निर्देशन एक कालोसूचीमा फोन को लागि काम, तर फोन अनलक कालोसूची देखि यसलाई हटाउन छैन भनेर मनमा राख्न हुनेछ। तपाईँको फोन कालोसूचीमा गरिएको छ? यहाँ जाँच
हामी हाम्रो जिम्मेवारी कुनै पनि कारण लागि आफ्नो फोन अनलक गर्न असमर्थ छौं भएको दुर्लभ घटना मा, हामी तपाईंलाई एउटा पूर्ण फिर्ती जारी हुनेछ।
के तपाईं संसारको कुनै पनि नेटवर्क प्रदायक संग आफ्नो फोन प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ।
यो विधि स्थायी हो र आफ्नो फोनको ग्यारेन्टी उल्लङ्घन छैन।
तपाईँको फोन कहिल्यै आफ्नो पक्ष छोड्न छ। को अनलक प्रक्रिया चलिरहेको बेला आफ्नो फोन प्रयोग गरेर जारी।
तपाईँको फोन चयन गर्नुहोस् र अनुरोध फारम भर्न।
ई-मेल गरेर आफ्नो अनलक कोड प्राप्त गर्नुहोस्।
आफ्नो फोन मा अनलक कोड टाइप
तपाईंको अर्डर स्थिति जाँच
तपाईँको फोन अनलक
आफ्नो फोन चयन गर्न अनुरोध फारम भर्नुहोस् र e-mail.?Once तपाईं आफ्नो चरण-चरण अनलक निर्देशन प्राप्त ब्रान्ड गरेको लोगो क्लिक हाम्रो सरल निर्देशनहरू आफ्नो फोन कुनै पनि नेटवर्क संग प्रयोग गर्न तुरुन्तै र तयार अनलक गरिनेछ पछ्याएका छन् प्रदायक।
देशहरूमा र नेटवर्क प्रदायकहरू अनुकूलता पूरा
सोधिने प्रश्न - फोन अनलक
+ Dr.Fone म कसरी मेरो फोन अनलक गर्छन् - सिम अनलक सेवा?
Dr.Fone तपाईँको फोन अनलक गर्न - सिम अनलक सेवा, आफ्नो फोन बन्द छ बनाउन, मोडेल, देश र नेटवर्क प्रदायक चयन गर्नुहोस्। हामी भुक्तानी प्राप्त भएपछि, तपाईंको अनुरोध प्रशोधन र प्रत्याभूति वितरण समय भित्र तपाईं आफ्नो फोन अनलक गर्न कसरी ई-मेल द्वारा सरल चरण-चरण निर्देशनहरूको प्राप्त हुनेछ।
तपाईं अनलक प्रक्रिया चलिरहेको बेला कुनै पनि विन्दुमा मद्दत गर्न आवश्यक छ भने हामीलाई च्याट, टेलिफोन मार्फत वा सामाजिक मिडियामा सम्पर्क गर्नुहोस्।
+ यो कति मेरो फोन अनलक गर्न खर्च गर्छ?
एक अनलक कोड को मूल्य धेरै कारक आधारमा फरक हुन्छ। सही मूल्य प्रदर्शित हुनेछ तपाईं आफ्नो फोन बन्द छ बनाउन, मोडेल, देश र नेटवर्क प्रदायक चयन गर्नुहोस्। साथै प्रत्येक अनलक लागि छूट प्राप्त रूपमा, हामी पनि हाम्रो वेबसाइट मा 50% को छूट समावेश छन्।
+ को अनलक स्थायी र लागू विदेश छ?
हो। एक पटक तपाईं संग सिम अनलक सेवा तपाईँको फोन अनलक तपाईँ कहिल्यै प्रक्रिया बारम्बार हुनेछ। तपाईं सामान्य रूपमा फोनको सफ्टवेयर अद्यावधिक र यो संसारमा कुनै पनि नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
+ यसलाई कसरी लामो मेरो फोन अनलक ले?
को प्रत्याभूति वितरण समय देश र नेटवर्क प्रदायक फोन गर्न बन्द गरिएको छ मा निर्भर गर्दछ। तपाईं अनुरोध फारम भरिएको गर्नुभएको जब यो समय फ्रेम, साथै समान unlockings लागि औसत वितरण समय, स्क्रिनमा प्रदर्शन गरिनेछ।